Imboni nabakhiqizi baseChina Izindondo Zokuphumelela | Kingtai
Bheka ukukhethwa kwethu Kwezindondo Zempumelelo, noma ngabe impumelelo iyini iMedali Yempumelelo ingumklomelo ophelele. Uhlu lwezindondo Zempumelelo yethu luhlanganisa izindondo zegolide, isiliva nezethusi kanye namabheji empumelelo.
Khipha ukhaphethi obomvu wezindondo zethu zeSifanekiso Sempumelelo, Amaribhoni Endondo, Izimo Zesethulo, Izindondo, Izindebe Nemiklomelo konke ngamanani aphansi kakhulu. Izindondo Zegolide Zesiliva Nethusi zifaneleka kunoma yimuphi umcimbi wokwethulwa ovela Emikhosini Yemiklomelo, Ukuqashelwa Kwenkampani, Ukwethulwa Kwesikole noma ukuklomelisa noma yiliphi ilungu leqembu umklomelo ohlukahlukene onemisebenzi eminingi. Siphinde sibe nokukhetha okuhle kwamaRibhoni Endondo yekhwalithi ephezulu ngaphezu kwenhlanganisela yemibala ehlukene engu-60 kusukela ku-Red, White & Blue eyake yathandwa kuya ku-Rainbow Ribbon yethu. Amacala ethu Okwethulwa Kwezindondo ayindlela enhle yokuqeda etholakala ngemibala ehlukahlukene.
Konke kwenziwa kube ngokwakho kalula nge-Metal Plate Engraving noma Okufakiwe Kwamahhala Okuphrintiwe Ngokwezifiso okunomklamo noma uphawu lwakho.
Siphinde sinikele ngezindondo zangokwezifiso, izikhonkwane zelebula namabheji, amaribhoni namakesi ezethulo enzelwe umklamo wakho ngamanani aphansi kakhulu.
Hlonipha labo abasebenza ngokuzikhandla futhi bafeze izinjongo zabo ngeNdondo Yempumelelo Eqondene Nakho Evela Kumiklomelo Ye-K2! Sinakho konke kusukela kuzindondo zegolide, isiliva nezethusi noma ezinombala ogqamile, konke kulula ukuzenza ngokwezifiso. Izindondo zethu ziza nokukhetha kwakho iribhoni enamathiselwe, kanye nokunye okwengeziwe, okuqoshiwe komuntu siqu ngemuva. Izindondo zokufaka ziyatholakala ngesitikha ozikhethele sona esibonisa izindawo eziningi zokuphumelela kwezemfundo nezokusubatha. Ingabe ufuna ukusebenzisa umklamo wakho? Vele ulayishe kalula idizayini yakho futhi uzothola ubufakazi bomklamo phakathi kwamahora webhizinisi angama-24. Uma usebenzisa izaphulelo zethu eziyinqwaba, ungathenga okwengeziwe futhi wonge!
Okwedlule: Iphinikhodi yokufa enamathele
Olandelayo: IZIndondo ZOKUQWASHISA